Ukukhuphuka Kwamarobhothi noma Ungaqala Kanjani I-Automation Yasekhaya - Ubuchwepheshe
Ukukhuphuka Kwamarobhothi noma Ungaqala Kanjani I-Automation Yasekhaya
Awudingi Ukuhlela Ukuzenzakalela Kwekhaya Lakho Lonke
Qala ngezinhlelo zokusebenza ezilula
Ungathengi Okungaphezu Kwalokho Okudingayo Ngephrojekthi Yakho
Khetha I-Automation Platform Yakho
Qiniseka ukuthi Wonke Amadivayisi Owathengayo Ayabuyela Emuva
Sebenzisa Ama-Actuator Elayini Alungile
Igama elithi ikhaya elihlakaniphile lingokoqobo manje. Kunamadivayisi amaningi emakethe ongawasebenzisa ukwenza ngokuzenzakalelayo Izibani zakho zasekhaya ezikhanyisa ngokuzenzakalelayo lapho kuba mnyama, a ukuphakamisa ideski lokudlala ngegumbi lakho lokuzilibazisa, nokuningi. Amathuba awapheli!
Kepha ngamadivaysi amaningi kangaka nezixazululo ezizenzakalelayo ezitholakalayo, kungaba inselele ukwazi ukuthi ungaqala kuphi ukwenza ikhaya lakho libe ngokuzenzakalela. Ngokuqinisekile uzozibuza imibuzo eminingi. Nokho, ngemva kokuqoqa ulwazi oluthile nokulandela imithetho ethile elula, uzokwazi ukuqala ukuzenzela ikhaya lakho.
Kodwa ngaphambi kokuthi uqale iphrojekthi ye-automation yasekhaya, kufanele uthole ukuqonda okuyisisekelo kokuthi i-automation yasekhaya isebenza kanjani. Okokuqala, kunamazinga amathathu ahlukene wokuzenzakalela kwekhaya:
Ukuqapha. Iqukethe izinzwa ezikala amapharamitha ahlukene ngokomzimba ekhaya (izinga lokushisa, umswakama, njll.). Kuhlanganisa nezinzwa eziqinisekisa isimo sezingxenye zasekhaya (ukuthi umnyango omkhulu uvaliwe, isibonelo);
Lawula. Iqukethe amasistimu angashintsha amanye amapharamitha aphathekayo ekhaya ngokuphendula umyalo. Isibonelo, izibani ongazivula ukude usebenzisa uhlelo lokusebenza;
Okuzenzakalelayo. Iqukethe amasistimu enza izenzo ngokuphendula okokufaka kwenzwa. Isibonelo, isistimu yokushisisa evulayo lapho izinga lokushisa lehla ngaphansi komkhawulo omncane.
Amaphrojekthi amaningi ezishintshayo ekhaya asezingeni lokulawula. Lokho kungenxa yokuthi izinga eliphezulu lokuzenzakalelayo lidinga amadivayisi athuthuke kakhulu. Ungasebenzisa ngisho nezingxenye zerobhothi ukuvala iminyango noma amafasitela lapho izinzwa zithola ukuthi zivuliwe. Izingxenye ezinjalo zibizwa ngokuthi ama-linear actuators. Ungawasebenzisela nokuma amadeski. Ama-actuator alayini ahlinzeka ngokunyakaza okuya phezulu ukuze kulungiswe ukuphakama kwethebulethi.
Ngakho-ke, uqala kanjani ukuzenzela ikhaya lakho? Nawa amanye amathiphu ongakwenza.
Iphutha elivamile ukugcizelela kakhulu mayelana nephrojekthi ye-automation. Ukuhlela uhlelo oluzenzakalelayo lwendlu yakho yonke kungaba nzima. Akufanele kube njalo. Eqinisweni, kungcono ukwenza ikhaya lakho ngokuzenzakalelayo ngezigaba ezahlukene. Imibono yakho yokuqala ingase iguquke ngokuhamba kwesikhathi. Izixazululo ezintsha ze-automation zihlala zifika emakethe.
Ngakho-ke, kungcono ukugxila endaweni yekhaya lakho kuqala. Isibonelo, ungaqala ngokwenza ikhishi ngokuzenzakalelayo. Maningi amathuba. Ungakwazi ukuwenza ngokuzenzakalelayo amashalofu lapho ugcina khona izinongo nezinye izinto. Okulandelayo, ungenza ithebula elilungisekayo noma usebenzise noma yimuphi omunye umbono.
Uma ungenalo ulwazi ngamaphrojekthi we-DIY, kufanele uqale ukuzenzela ikhaya lakho ngezinto ezilula. Kuwumkhuba ojwayelekile ukuqala ukuzenzela izibani zendlu yakho. Kodwa akudingekile. Qala ngento ozizwa ukhululekile ngayo. Lapho uqeda lesi sigaba sokuqala cishe uzozibuza: yini engingayenza ngokuzenzakalelayo ngokulandelayo?
Ngemuva kokunquma ukuthi iyiphi ingxenye yendlu yakho ozoyenza ngokuzenzakalelayo kuqala, udinga ukuthenga imishini edingekayo. Kunconywa ukuthi uthenge lokho ozokusebenzisa, kungabi ngaphezu kwalokho. Uma ukhetha ukwenza izibani zakho zibe ngokuzenzakalela, thenga izinzwa namalambu ozowasebenzisa ngokushesha. Ukuthenga izisetshenziswa ezengeziwe kungaba nomthelela omubi kwisabelomali sakho.
Kufanele ukhethe inkundla ye-automation ekuvumela ukuthi uxhume amadivaysi ahlukene. Ezinye izinkundla zisekela amadivayisi avela kubakhiqizi abaningi, kanti amanye asekela amadivayisi obunikazi kuphela. Kuyancomeka ukuthi ukhethe inkundla ekunikeza ukuguquguquka okwengeziwe. Kulula kakhulu ukwazi ukulawula wonke amadivayisi akho azenzakalelayo usuka kuhabhu eyodwa. Ezimweni eziningi, ungaxhumana nehabhu ngohlelo lokusebenza lweselula. Ungaba nohlelo lokusebenza olulodwa lokulawula wonke amadivayisi akho asekhaya azenzakalelayo esikhundleni samaningi.
Imikhiqizo ye-automation emakethe ithuthuka ngokuqhubekayo. Eminye imikhiqizo iyekwa futhi emisha iyafika. Ngakho-ke, kufanele uqinisekise ukuhambisana okubuyela emuva kumaphrojekthi akho e-automation. Ngale ndlela, ungaqhubeka nokwandisa isistimu yakho ezishintshayo ngaphandle kokufaka amadivayisi amadala. Ngakho-ke, lapho uthenga amadivayisi amasha, hlola imininingwane yawo yobuchwepheshe. Qinisekisa ukuthi angakwazi ukuxhumana namadivayisi onawo ekhaya asevele esebenza.
Uma ufika ezingeni eliphezulu kakhulu le-automation yasekhaya, cishe uzosebenzisa ama-actuator alayini. Ukwakha i-TV lift noma itafula elingalungiseka ubude kungaba iphrojekthi ethokozisayo. Nokho, kudinga ulwazi oluthe xaxa namakhono ohlangothini lwakho. Okubaluleke kakhulu, kufanele ukhethe i-actuator yomugqa efanele yohlelo lokusebenza. Kunama-actuator alayini amaningi ahlukene emakethe.
Ngaphambi kokuthenga noma yini, yenza uhlu lwezidingo zakho. I-actuator izophakamisa siphi isisindo? Bungakanani ubude bokunyakaza komugqa okudingayo? Buza le mibuzo ukuze ukhethe i-actuator efanele yohlelo lwakho lokusebenza.